नेपाली नायिकाहरु कसले कति पढेका छन्, पुरा हेर्नुहोस। - ABNews Nepal
Feb 5, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, latest ramailo samachar, taja khabar nepal, tajakhabar
नेपाली कलाकारहरुलाई कालो अक्षर भैंसी बराबर भनेर कुरा काट्नेहरुको कमी छैन्। कतिले त नेपाली नायिकाहरुलाई नाच्ने नर्तकीको रुपमा मात्र हेर्ने गरेको पाईन्छ। नपढेकै नायिकाहरुले रजतपट धानेकाले पनि पढेका नायिकाहरु ओझेलमा परेका हुन सक्छन्। करिश्मा मानन्धर देखि रेखा थापासम्म जसले १० कक्षाको अनुहार देखेकै छैनन् भनेर धेरैले मान्दै आयका छन्। यद्धपी केही नेपाली नायिकाहरुले यति पढेका छन् कि सुनेर तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। नेपाल आजले अनलाइनले विशेष सोध खोज गरेर यो रिर्पोट तयार पारेको छ। जसबाट हामीले साभार-गर्दैछौं। १- संचिता लुईटेल नेपाली चलचित्रकी ‘अप्सरा’ संचिता लुईटेल पछिल्लो समय चलचित्रमा देखिएकी छैनन्। निखिल उप्रेतीसंग दोश्रो विवाह गरेर दुई सन्तान जन्माएकी उनले बागबजारको पद्मकन्या क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एम ए गरेकी छिन्।
२- केकी अधिकारीः मसान चलचित्र खेलेर वाहीवाही बटुलेकी केकी अधिकारी अहिले भर्खरै पर्दशनमा आएको चलचित्र ‘ऐश्र्वय’ले चर्चामा छिन्। फिल्म निर्देशक बद्री अधिकारीकी छोरी भएका नाताले पनि कलिउडमा उनको इज्जत नगर्ने भेटीदैँनन् । नायिका केकीले हुमन रिर्सोस म्यानेजम्यान्टमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। ३. ऋचा शर्माः नायिका ऋचा शर्माको ट्याग नै बौद्धीक नायिका हुने गर्छ। उनले लिटिल एञ्जल स्कुल हात्तीवनबाट स्कुले जीवन प्रारम्भ गरेकी थिइन् । पछि गोल्डेनगेटबाट ब्यवस्थापनमा स्नातकोर गरेकी छिन्। उनले यस बाहेक जर्मनी र फ्रान्सबाट कलाकारिता सम्बन्धी अध्यन गरेकी छिन्। जिवन्त अभिनय गर्ने क्षमताकी धनि ऋचाले नेपाली रजतपटमा ‘फस्ट लभ’ चलचित्रबाट पाईला टेकेकी थिइन् । जुन सर्वधिक सफल चलचित्र मानिन्छ । त्यसअघि उनले पहिलो पल्ट यस कुमारको ‘थाकेको यो नजरमा’ भन्ने गीतबाट अभिनय यात्रा थालेकी थिईन्।
४. निशा अधिकारीः कहिले सगरमाथा चढेर त कहिले कपाल पूरै मुण्डन गरेर चर्चामा आईरहन मन पराउने निशा अधिकारी पछिल्लो समय नेपाली क्रिेटर शरद भेष्वाकरसंग विवाह गरेर झन चर्चीत भईन्। विवाहले भन्दा धेरै पूर्व प्रेमीले कार फिर्ता मागेको प्रसंगले खैलाबैला मच्चाएपछि निशा र शरद दुवै जनआश्था लगायतका अन्य अनलाईन पत्रिका बिरुद्ध नै खनिए । तिनै नायिकाले अध्ययन भने अमेरीकामा गरकी छन्। उनले फिल्म र सामाजिक विज्ञानमा स्नातक सम्मको अध्यन गरेकी छिन् । उनी निर्माण गरेको फिल्म ‘झ्यानाकुटी ’ प्रर्दशनको तयारीमा रहेको छ। यहि नोभेम्वर १७ तारीखदेखी देश भरी प्रदर्शन हुने चलचित्रको पोष्टर अहिले भाइरल बनेको छ। जहाँ बेनिशा हमालले सौगात मल्ललाई जुरुक्कै उचालेकी छिन् ।
रिमा विश्वकर्माः चलचित्र खेलेर भन्दा पनि मोडलिङ र कार्यक्रम चलाएर हिट बनेकी रिमा विश्वकर्माले पिनाकल एकेडेमीबाट अंग्रेजी र मास मिडियामा स्नातक गरेकी छन्, उनको अध्यन निरन्तर छ। उनले हालसालै एक एनआरएन संग विवाह गरेकी छिन्। पछिल्लो समयमा नेपाल आईडलको प्रस्तोता हुँदा उनले धेरैको मन जितेकी भने अवश्य थिइन्। प्रियंका कार्कीः नेपाली सिने उद्योगकी चल्तीकी नायीका सुपर मोडेल तथा आफूलाई प्रेमी आयुश्मान देशराज जोशीकी पे्रमीका भन्न रुचाउने प्रियंका कार्कीलाई छक्का पञ्जाले उचाल्नु उचालेको छ। उनको माग नेपाली चलचित्रमा पहिलो हुने गरेको छ। उनै ‘चोली अली छोटो’ नायिकाले अमेरीकाको युनिर्भसिटी अफ अलबामाबाट चलचित्रमा डिप्लोमा गरेकी छन्। उनी पनि बौद्धिक नायिकाको क्याटोगोरीमा पर्ने गर्छिन्।
यो संगै नेपालि फ्लिम क्षत्रमा कुन नायिकाले कतिसम्म अध्यन गरेका छन् भन्ने बारेमा धेरैको जिज्ञाशाको बिषयलाई हामीले नेपाल आजबाट लियका हौँ। पछिल्लो समय केहि कलाकारहरुले आफ्नो उमेर र पढाईको बारेमा राम्रो संग बताउन नचाहने समेत गरेको हाम्रै अन्तर्वार्ताको क्रममा पाउन सकिन्छ। तर माथी उल्लेखित नामका नायिका हरुको पढाई बारेमा धेरैले जान्न खोजेको कुरालाई यसरी साभार गरेका हौँ।